Ukucaciswa kwe-Oukitel U23 | I-Androidsis
Ukucaciswa kwe-Oukitel U23
UIgnacio Sala | | Izaziso, I-Oukitel
Sithethile iiveki ezimbalwa malunga nokuqaliswa okulandelayo kwenkampani yaseAsia iOukitel, inkampani encinci kancinci i-niche ebalulekileyo iyenziwa kwimarike, enkosi kumgangatho wezixhobo ezikhutshwa minyaka le. Isixhobo esilandelayo esiza kufikelela kwintengiso yale nkampani ngu-U23, isiphelo sendlela inkampani eyamkela kuyo inotshi.
I-Oukitel U23, sisiphelo esisibonelela inani elikhulu leempawu ezintsha xa kuthelekiswa neetheminali zangaphambili. Eyokuqala, kunye neyona ibalaseleyo, kukufakwa kwenotshi. Ukongeza, ngasemva sifumana uyilo lwegradient ethi, kuxhomekeke kukukhanya okubonisiweyo, isinike iithowuni ezinqwenelekayo zegolide okanye eziluhlaza. Ukuba ufuna ukwazi zonke iinkcukacha ze-Oukitel U23, qhubeka ufunda.
Enye into etsala umdla we-Oukitel U23 siscreen, a Iscreen se-6,18-intshi enesisombululo se-FullHD +, esinefomathi ye-19: 9.5 yohlobo IPS kunye nobuchwepheshe beLCD. Ngaphakathi sifumana I-Android 8.1 ihamba ne-6 GB ye-RAM, i-64 GB yokugcina kunye neprosesa yeMediaTEk P23. Imizobo yesi sixhobo yiMali G72 MP2 esinokuthi ngayo sihambise imidlalo esiyithandayo efana nePUBG, Uzuko lweKumkani, uMdyarho weemoto, phakathi kwabanye, ngaphandle kwengxaki okanye ukufudumala.
Emuva, sifumana ikhamera ngasemva kabini, eyokuqala ye-16 mpx yenziwe yi-Samsung kunye neyesibini ye-2 mpx. Zombini zixhomekeke kwisibane se-LED ukukhanyisa xa kungekho kukhanya kungako. Ngaphambili, sifumana ikhamera ye-8 mpx.
I-Oukitel P23 ilawulwa yi-3.500 mAh ibhetri, ibhetri ehambelana nokutshaja ngokukhawuleza kwaye nayo ixhasa ukutshaja ngaphandle kwamacingo kwe-10w. Ngokuphathelene nokhuseleko, esi siginali sisinika inkqubo yokwamkelwa kobuso ehamba nesenzwa yeminwe ngasemva.
Ngaphandle, sifumana ifayile ye- Unxibelelwano lwejack ye-3,5 mm kunye Uhlobo lwe-USB-C lokudibanisa ukutshaja isixhobo. I-Oukitel U23 inobungakanani be-153.5 x 73.2 x 8.7 mm kunye nobunzima be-201 gram.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Ukucaciswa kwe-Oukitel U23
Ezinye zeendawo ezaziwa kakhulu yiPUBG Mobile ziphefumlelwe yiChernobyl
IAmazon Alexa Vs Google Assistant, duel yabancedisi kwi-Android